Maxaa kala haysta Xafiiska Madaxweyne Farmaajo iyo Saxaafadda Magaalada Muqdisho? | Baydhabo Online
Maxaa kala haysta Xafiiska Madaxweyne Farmaajo iyo Saxaafadda Magaalada Muqdisho?
Mad madow, ayaa soo kala dhex galay Xafiiska Madaxtooyada Somaliya iyo Suxufiyiinta Magaalada Muqdisho, ka dib markii wiilal yar yar oo ku xeeran Madaxweynaha, ay isa siiyeen Madaxweynaha, kana xigsadeen Saxaafadda.
Wiilashan, ayaa waxay isu deyayaan in ay qabtaan hawlihii caadiga ahaa, ee ay qabanayeen Suxufiyiinta Magaalada Muqdisho, waana tallaabo bilow ah oo ay ku cunaqabateynayaan Suxufiyiinta.
Wiilashan, ayaa bilaabay in Suxufiyiinta ka horjoogsadaan ka qaybgalka kulamada uu qabanayo Madaxweynaha Somaliya, Maxamed C/laahi Maxamed (Farmaajo), iyagoona Wariye-yaasha u sheegaya in wixii macluumaad ah loogu soo diri doono Emailadooda.
Kulamadii ugu dambeeyay ee uu qabtay Madaxweynaha Somaliya, ayaynaan ka qaybgelin Suxufiyiinta. Arrintan waxay soo bilaabatay 23-kii bishii February oo Madaxweynaha Somaliya uu soo magacaabay Ra’iisal Wasaare Xasan Cali Khayre.
Magacaabidda Ra’iisal Wasaaraha, ayaan lagu wargelin Suxufiyiinta Muqdisho. Wiilasha la shaqeeya Madaxweynaha oo muuqaal video ah ka soo duubay magacaabista, ayaa kol dambe la wadaagay Warbaahinta, iyagoona u mariyay Emailadooda.
Bahda Saxaafadda, ayaa waxaa tan iyo xilligaa ku adkaatay in ay si dhow ula socdaan sheekooyinka ku saabsan kulamada Madaxweynaha iyo waxa dhabta ahi, ee kulamadaasi looga hadlay.
Tani waa wax ku cusub Xarunta Madaxtooyada Somaliya, waana wax ay aad u hadalhayan Wariye-yaasha ka hawlgala Magaalada Muqdisho.
Madaxdii Farmaajo ka horeysay, ayaa Saxaafadda u yeeri jirtay, si ay uga xog waramaan kulamada u qabsoomay, cidda ay la qaateen iyo waxyaabaha ay uga wada hadleenba.
Suxufiyiinta, ayaa waxay tallaabadani u arkaan mid caqabad ku ah shaqadooda, iyagoo wax aan u cuntami karin u arka in dad gaar ihi ay qabtaan shaqadii ay qaban lahaayen.
Arrinta kale ee ay ka biyo diidan yihiin Suxufiyiinta Magaalada Muqdisho waxaa weeye, in wiilasha la wareegay shaqadoodii ay saacado ka dib farriin ahaan ugu soo gudbiyaan wararka ku saabsan kulamada Madaxweynaha, bedelkii ay iyagu waqti gaaban ku soo gudbin jireen.
Haddii ay tani sii socoto waxay meesha ka saari doontaa wada shaqayntii la fillaayay in ay dhex marto Xafiiska Madaxweynaha iyo Saxaafadda Muqdisho.